Booliiska Kenya oo Xidhey Dhakhtar Loo Malaynayo inu la Shaqeeyo Al-shabaab |
Booliiska Kenya oo Xidhey Dhakhtar Loo Malaynayo inu la Shaqeeyo Al-shabaab
Dhakhtarkan oo lagu magacaabo, Yaqub Cabdi Cumar oo 29-jir ah ayaa lagu sheegay inu asalkiisu yahay Soomaali, xidhitaankiisan ayaa ka dambeeyay kaddib markii uu booqday isbitaalka Marsabit County Referral, isagoo ay la socdaan dhallinyaro koox ah oo la tuhunsan yahay inay xubno ka yihiin Al-shabaab.
Madaxa baadhista dambiyada ee Mersabet, Bernard Barasa ayaa sheegay inay raadinayaan saddex ruux oo kale oo lagu tuhunsan yahay inay dhakhtarkan ku wehlinayeen booqashada uu ku yimid isbitaalka magaaladooda.
Sidoo kale, sarkaalkan ayaa intaas ku daray in kooxdadn dhallinyarada la tuhunsan yahay ay booqdeen isbitaalka saq-dhexe, kaddib markii ilaalada isbitaalka ay u sheegeen inay booqanayaan bukaan isbitaalka jiifa.
Taliyaha baadhista dambiyada ee deegaankaas, Barasa ayaa xusay in qofka ay hayaan uu deggen yahay Magaalada Nairobi dhawaana ku soo laabtay Marsabit si uu waalidkiis u soo booqdo.
Dhanka kale, baadhitaanno hordhac ah oo la sameeyay ayaa la sheegayaa in ragga kale ee la tuhunsan yahay ay ka mid yihiin dadka deggen magaalada Marsabit; asalkooduna yahay Soomaali.